ပွညျသူမြားနားလညျသငျ့ပွီလား? သို့မဟုတျ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေောဘယျအဆငျ့လဲ? – THE CHINLAND POST
ပွညျသူမြားနားလညျသငျ့ပွီလား? သို့မဟုတျ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေောဘယျအဆငျ့လဲ?
Author - Salai Cung Lian/Personal Facebook
Salai Cung Lian Uk| Ph.D(Candidate) & Lawyer| University of Yangon| TCP-Hakha| 2020 October 30| ပွညျသူမြား နားလညျသငျ့ပွီမလား? သို့မဟုတျ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေော့ ဘယျအဆငျ့လဲ? (Unicode & Zawgyi)
၁။ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ မိတျဆကျခွငျး
နိုငျငံတိုငျးမှာ အခွခေံဥပဒေ သို့မဟုတျ အခွခေံဥပဒကေဲ့သို့ တညျဆဲဥပဒေ၊ စီရငျထုံး၊ ဆုံးဖွတျခကျြ၊ အဆိုအမိနျ့စသဖွငျ့ ရှိကွတယျ။ တခြို့နိုငျငံတှေ မှာဆိုရငျ အခွခေံဥပဒဟေု ချေါဆိုကွတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာဆိုရငျလညျး ယခုကငျြ့သုံးနတေဲ့ ၂၀၀၈ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒရှေိတယျ။ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမှောက နိုငျငံတျောကို ဘယျလိုဘယျပုံနဲ့သှားမလဲ… မဏ်ဍိုငျ(၃)ရပျဖွဈတဲ့ ဥပဒပွေုရေး၊ အုပျခြုပျရေး၊ တရားစီရငျရေးတို့ကို သီးခွားထားရှိပွီး အပွနျအလှနျဘယျလိုထိနျးကြောငျးမလဲ…. အာဏာ(၃)ရပျကို ဘယျလိုခှဲဝကေငျြ့သုံးမလဲ.. ဥပမာ-တိုငျး/ပွညျနယျတှကေို အာဏာကို ဘယျလိုခှဲဝမေလဲ.. ဘယျလောကျကို လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာပေးထားမလဲ.. ရှေးကောကျပှဲကို ဘယျပုံဘယျနညျးနဲ့ကငျြးပမလဲ. .စတာတှကေို အခွခေံအားဖွငျ့ ဖျောပွသတျမှတျပေးထားတာဖွဈတယျ။
ယခုမွနျမာနိုငျငံမှာဆိုလြှငျ ၂၀၀၈ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမှော သတျမှတျထားတဲ့အတိုငျး (၅)နှဈ တဈကွိမျကငျြးပလကျြရှိသော အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကွီးကို နိုဝငျဘာလ(၈)၊ ၂၀၂၀ခုနှဈ(တနင်ျဂနှနေေ့)မှာ နိုငျငံတဝှမျးလုံး တပွိုငျနကျ ကငျြးပရနျ ကျောမရှငျက ထုတျပွနျပွီးဖွဈပါတယျ။
အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှ အနိုငျရရှိလာတဲ့ ကိုယျစားလှယျတှကေ လှတျတျောကနတေဆငျ့ နိုငျငံတျောသမ်မတကို ရှေးခယျြတငျမွှောကျရမယျဖွဈ တယျ။ ပွညျထောငျစုအစိုးရဆိုတဲ့အခါ နိုငျငံတျောသမ်မတဦးဆောငျသော အဖှဲ့ကို ဆိုလိုတာဖွဈတယျ။ နိုငျငံတျောသမ်မတက သူ့အစိုးရအဖှဲ့ (ပွညျထောငျစုအစိုးရ)ကို ဖှဲ့စညျးရမှာဖွဈတယျ။ ပွညျထောငျစုအစိုးရမှာ နိုငျငံတျောသမ်မတ၊ ဒုသမ်မတမြား၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြားနဲ့ ပွညျထောငျစုရှနေ့ခြေုပျတို့ ပါဝငျတာဖွဈတယျ (ပုဒျမ-၂၀၀-ဖှဲ့စညျးပုံ)။ သူ့အစိုးရအဖှဲ့(ပွညျထောငျစုအစိုးရ)ကို ဖှဲ့စညျးတဲ့အခါမှာလညျး သူလိုခငျြတဲ့ပုဂ်ဂိုလျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျဖွဈစေ၊ ပွငျပပုဂ်ဂိုလျဖွဈစေ ဥပဒကေ သတျမှတျထားတဲ့အရညျအခငျြးနဲ့ ပွညျ့စုံလြှငျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးအဖွဈ ခနျ့အပျရမယျဖွဈတယျ။ ကာကှယျရေး၊ နယျစပျရေး၊ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးမြားမပါ။
၂၀၀၈ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမှော ဇယား(၅)ခုရှိတဲ့အနကျ (၃)ခုဟာ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာနဲ့ သကျဆိုငျခွငျးဖွဈတယျ။ ဇယား(၁)မှာဆိုရငျ ပွညျထောငျစုက ဥပဒပွေုခှငျ့ရှိသော ကိစ်စရပျမြား၊ ဇယား(၂)မှာက တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျက ဥပဒပွေုခှငျ့ရှိသော ကိစ်စရပျမြား၊ ဇယား(၃)မှာလညျး ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရတိုငျး(သို့မဟုတျ)ဒသေဦးစီးအဖှဲ့က ဥပဒပွေုခှငျ့ရှိသော ကိစ်စရပျမြား စသညျ့ဖွငျ့ ဖျောပွပေးထားတယျ။
ပွညျထောငျစုအဆငျ့(အုပျခြုပျရေးဖွဈစေ၊ လှတျတျောဖွဈစေ၊ တရားရေးဖွဈစေ)က စီမံဆောငျရှကျခှငျ့ရှိသော ကိစ်စရပျတှဟော ပွညျထောငျစုဥပဒပွေုစာရငျး(ဇယား-၁)မှာ ဖျောပွသတျမှတျပေးတာဖွဈတယျ။ အဲ့ဒီမှာ ကဏ်ဍကွီး(၁၁)ရပျရှိတဲ့အနကျ လုံးဝကို ပွညျထောငျစုအဆငျ့မှာသာ အပျနှငျးပေးထားတာက ကာကှယျရေးနှငျ့လုံခွုံရေးကဏ်ဍ၊ နိုငျငံခွားရေးကဏ်ဍနှငျ့ တရားရေးကဏ်ဍမြား (Union Defense and Security Sector, Foreign Affairs Sector and Judicial Affairs Sector) ဖွဈတယျ။ ကနျြတဲ့ ကဏ်ဍ(၈)ရပျတှကေ ပွညျထောငျစုက ပွဌာနျးတဲ့ဥပဒေ သို့မဟုတျ ပွညျထောငျစုအဆငျ့က စီမံဆောငျရှကျရမညျဟု ဖျောပွသတျမှတျပေးထားခွငျးမြားမှအပ တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျ ဥပဒပွေုစာရငျး (ဇယား-၂)မှာ ပွနျလညျဖျောပွပေးထားတာဖွဈတယျ။
တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျက စိမံဆောငျရှကျခှငျ့ရတဲ့ကိစ်စရပျမြားဟာ တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျဥပဒပွေု စာရငျး(ဇယား-၂)မှာ ကဏ်ဍပေါငျး(၈)ရပျနဲ့ ဖျောပွထားတယျ။ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရတိုငျး/ဒသေ၏ စီမံအုပျခြုပျ ခှငျ့ရကိစ်စရပျနဲ့ပတျသကျတော့ ဇယား(၃)မှာ ဖျောပွထားပါ။ အသေးစိတျတော့ မဖျောပွတော့ပါဘူး။
၄။ တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရနှငျ့ ၎င်းငျးတို့လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာ
နိုငျငံတျောသမ်မတက တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျထဲက သတျမှတျထားသော အရညျအခငျြးနဲ့ ပွညျ့စုံသူတဈဦးအား ဝနျကွီးခြုပျအဖွဈ သကျဆိုငျရာတိုငျးဒသေကွီး /ပွညျနယျလှတျတျောထံ သဘောတူညီခကျြရယူရနျ တငျသှငျးရမယျ(ပုဒျမ-၂၆၁-ခ(၂)၊ဖှဲ့စညျးပုံ)။ သူဟာ သတျမှတျအရညျခငျြးနဲ့ ပွညျ့စုံရငျ လှတျတျောက ကနျ့ကှကျခှငျ့မရှိပါ။ အကယျလို့ လှတျတျောက ခိုငျလုံတဲ့အထောကျအထားနဲ့ ကနျ့ကှကျ နိုငျရငျလညျး နိုငျငံတျောသမ်မတဟာ မရရအောငျ ထပျမံတငျသှငျးခှငျ့ရှိပွနျတယျ။ ဆိုတော့ နိုငျငံတျောသမ်မတဟာ သူလိုခငျြတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျကို သကျဆိုငျရာဝနျကွီးခြုပျအဖွဈ ခနျ့ကို ခနျ့ရမယျ့ တာဝနျရှိနတေယျ။
အဲ့လိုပဲ ဝနျကွီးခြုပျကလညျး သူ့အစိုးရအဖှဲ့(တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့)ကို သငျ့လြျောသောပုဂ်ဂိုလျမြားနဲ့ တိုငျး/ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြားထဲကဖွဈစေ၊ ပွငျပပုဂ်ဂိုလျဖွဈစေ ရှေးခယျြရတယျ။ ပွီးရငျ ဝနျကွီးခြုပျရှေးခယျြထားတဲ့ စာရငျး(ဝနျကွီးမြားစာရငျး)ကို သကျဆိုငျရာလှတျတျောထံ သဘောတူညီခကျြရယူဖို့ တငျသှငျးရမညျ။ လှတျတျောကလညျး သတျမှတျတဲ့အရညျးခငျြးနဲ့ပွညျစုံရငျ ငွငျးပယျခှငျ့မရှိဘူး(ပုဒျမ-၂၆၂-ဂ)၊ဖှဲ့စညျးပုံ။ ငွငျးပယျရနျ အကွောငျးရှိရငျလညျး ဝနျကွီးခြုပျက ထပျမံတငျသှငျးခှငျ့ရှိတယျ။ ပွီးမှ နိုငျငံတျော သမ်မတထံ တငျပွအကွောငျးကွားရတယျ။
တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအစိုးရ၏ အုပျခြုပျမှုအာဏာသညျ ဇယား(၂)ရဲ့ တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျ လှတျတျောက ဥပဒပွေုခှငျ့ရှိသော ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပွညျထောငျစုဥပဒတေဈရပျရပျက တိုငျးဒသေကွီး/ ပွညျနယျအစိုးရကို စီမံဆောငျရှကျခှငျ့ပေးသောကိစ်စရပျမြား စသညျတို့ကိုပေးထားတယျ(ပုဒျမ-၂၄၉၊ဖှဲ့စညျးပုံ)။ တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအစိုးရသညျ ပွညျထောငျစုအစိုးရက ခမြှတျသော မူဝါဒမြားနဲ့ဖွဈစေ၊ ပွညျထောငျစု ဥပဒတေဈရပျရပျနဲ့ဖွဈစေ မဆနျ့ကငျြစဘေဲ မိမိတိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအတှငျး ဆောငျရှကျရမညျ့ လုပျငနျးမြားနဲ့ပတျသကျပွီး စီမံကိနျးမြားကို မိမိလှတျတျော၏ သဘောတူညီခကျြဖွငျ့ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျလို့ရတယျ။
တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအစိုးရသညျ ၎င်းငျးဝနျကွီးမြား၏ လကျအောကျရှိ အစိုးရဌာနမြား၊ အဖှဲ့ အစညျးမြား၏ လုပျငနျးဆောငျရှကျမှုမြားကို ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒနေဲ့အညီဖွဈစေ၊ တညျဆဲဥပဒနေဲ့အညီဖွဈစေ စီမံခနျ့ခှဲခွငျး၊ လမျးညှနျခွငျး၊ ကွီးကွပျခွငျး၊ စဈဆေးခွငျးမြား ပွုနိုငျတယျ(ပုဒျမ-၃၁၊ တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရ ဥပဒေ)။ ပွီးတော့ မိမိတို့ဆောငျရှကျနသေော လုပျငနျးမြားကို ထိရောကျစှာ အကောငျအထညျ ဖျောနိုငျရနျ ပွညျထောငျစုအစိုးရက ပေါငျးစပျညှိုနှိုငျးပေးခွငျးကို လကျခံလိုကျနာရမယျ(ပုဒျမ-၃၀၊ တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရ ဥပဒေ)။
အုပျခြုပျမှုဆိုငျရာ အငွငျးပှားမှုမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ပွညျထောငျစုအစိုးရမှာသာ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာ အပျနှငျးထားပွီး ၎င်းငျးဆုံးဖွတျခကျြသာ အတညျဖွဈရမယျလို့ ဖျောပွထားတယျ(ပုဒျမ-၃၂၊ တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရ ဥပဒေ)။ အဲ့ဒီလိုပဲ ဥပဒပွေုမဏ်ဍိုငျမှာလညျး တိုငျး/ပွညျနယျလှတျတျောက ပွုထားသော ဥပဒနှေငျ့ ပွညျထောငျစုက ပွုထားသော ဥပဒအေကွား ကှဲလှဲမှုရှိပါက ပွညျထောငျစုဥပဒကေသာ အတညျဖွဈရမယျဟု ဖျောထားတယျ။
တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရက တိုငျး/ပွညျနယျလှတျတျောရဲ့ခမြှတျထားသော အုပျခြုပျရေးဆိုငျရာ ဆုံးဖွတျခကျြကို အကောငျအထညျဖျောရမညျ့အပွငျ လှတျတျောထံကိုလညျး ပွနျတငျပွရမညျ။ မိမိနယျမွေ ဒသေ၏အခွနေနှေငျ့ပတျသကျ၍ အစီရငျခံစာကို ပွညျထောငျစုအစိုးရနှငျ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောထံသို့ တငျပွရမညျဟု ဖျောပွထားတယျ။
၅။ ပွညျထောငျစုအစိုးရနှငျ့ တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရ၏ဆကျနှယျမှု
ပွညျထောငျစုအစိုးရ၏ အုပျခြုပျမှုဆိုငျရာအခှငျ့အာဏာဟာ ပွညျထောငျစုလှတျတျောက ဥပဒပွေုနိုငျသော ကိစ်စရပျမြားဖွဈရမညျဟု ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ၊ ပုဒျမ-၂၁၆မှာ ဖျောပွထားပွီးဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ ပွညျထောငျစု အစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးမြားသညျ ယငျးတို့၏ လကျအောကျရှိအစိုးရဌာနမြား၊ အဖှဲ့အစညျးမြားက လုပျငနျးတာတာဝနျမြား ဆောငျရှကျကွရာတှငျ ဥပဒနေဲ့အညီ စီမံခနျ့ခှဲခွငျး၊ လမျးညှနျခွငျး၊ ကွီးကွပျခွငျး၊ စဈဆေးခွငျးမြား ပွုလုပျနိုငျသညျဟု ပွညျထောငျစုအစိုးရဥပဒေ၊ ပုဒျမ-၅၄မှာ ဖျောပွထားတယျ။ နိုငျငံတျောသမ်မတရဲ့ သီးသနျ့ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာကို မဖျောပွတော့ပါဘူး။
ဆိုတော့ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးဌာနမြားအခနျးကဏ်ဍကိုကွညျ့ရအောငျ…ဝနျကွီးဌာနပေါငျး (၂၀)ကြျောရှိတယျ။ ဝနျကွီးဌာနတဈခငျြးစီမှာ အဆငျ့ဆငျ့သောဌာမြား- တိုငျး/ပွညျနယျအဆငျ့၊ ခရိုငျအဆငျ့၊ မွို့နယျအဆငျ့ စသဖွငျ့ ဌာနဖှဲ့စညျးပုံဆိုတာရှိကွသလို ဌာနတှငျး စညျးမဉျြးဥပဒေ၊ ညှနျကွားခကျြ၊ အမိနျ့၊ လုပျထုံးလုပျနညျး စတာတှရှေိတယျ။ အဲ့ဒီမှာ လုပျငနျးစီမံကိနျးတဈခုကို ဆောငျရှကျတဲ့အခါ အနိမျ့ဆုံးအဆငျ့ကနေ အထကျကို တငျပွပွီး..အထကျကအတညျပွုပေးကာ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျ တာရှိသလို….အထကျက အောကျအဆငျ့(အဆငျ့နိမျ့)သို့ ညှနျကွားပွီး ဆောငျရှကျခိုငျးတာလညျးရှိတယျ။
ဝနျကွီးဌာနတိုငျးမှာ ယငျးတို့စီမံခနျ့ခှဲတဲ့ ဥပဒေ၊ နညျးဥပဒေ၊ အမိနျ့၊ ညှနျကွားခကျြ စတာတှရှေိတယျ။ တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရကိုလလေ့ာကွညျ့ မယျဆိုရငျ တဆငျ့ခံဝနျကွီးဌာနတှပေဲ ဖွဈတယျ။ အဲ့တော့ တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရရဲ့ ညှနျကွားခကျြနဲ့ ပွညျထောငျစုအစိုးရရဲ့ ညှနျကွားခကျြကို နှိုငျးယှဉျလလေ့ာ ကွညျ့မယျဆိုရငျ…. ပွညျထောငျစုအဆငျ့ ဝနျကွီးဌာနရဲ့ စီမံဆောငျရှကျမှုသာ အတညျဖွဈတာမြားတယျ။ အဲ့ဒီမှာ တိုငျး/ပွညျနယျ အစိုးရရဲ့ စီမံဆောငျရှကျမှုဟာ ဥပဒနှေငျ့ညီရငျ..မရဘူလား…မေးစရာရှိတယျ…ဟုတျတယျ.. မှနျပါတယျ.. သို့သျော လကျတှမှေ့ာ ဥပဒေ၊ နညျးဥပဒတှေရေဲ့ အနှဈသာရ၊ အနကျအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုခကျြ စတာတှဟော… ပွညျထောငျစုအဆငျ့အဖှဲ့အစညျး သို့မဟုတျ ဖှဲ့စညျးပုံဆိုငျရာခုံရုံးမှာပဲ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာ ရှိတာဖွဈတော့… ပွညျထောငျစုအဆငျ့ဝနျကွီးဌာနရဲ့ စီမံဆုံးဖွတျခကျြကိုသာ မကျြနှာသာ အနိုငျပေးတာမြား တယျ။ ဥပဒအေရ ကွညျ့မယျဆိုရငျ “ပွညျထောငျစု၊ တိုငျးဒသေကွီးမြား၊ ပွညျနယျမြားနှငျ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရစီရငျစုမြား၏ အုပျခြုပျမှုဆိုငျရာအာဏာပိုငျမြား၏ ဆောငျရှကျခကျြမြားသညျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒနှေငျ့ ညီညှတျခွငျး ရှိမရှိ စိစဈခွငျး” ဟု ပုဒျမ-၃၂၂(ဂ)မှာ ဖျောပွထားတယျ။ အဲ့လိုပဲ ပုဒျမ-၃၂၂(င)မှာလညျး “တိုငျးဒသေကွီး၊ ပွညျနယျ သို့မဟုတျ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရစီရငျစုတို့က ပွညျထောငျစုဥပဒကေို အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျရာတှငျ ပွညျထောငျစုနှငျ့ တိုငျးဒသေကွီး၊ ပွညျနယျ သို့မဟုတျ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရစီရငျစုတို့၏ အခှငျ့အရေးနှငျ့ တာဝနျနှငျ့စပျလဉျြး၍ ပျေါပေါကျသညျ့ အငွငျးပှားမှုမြားကို ဆုံးဖွတျခွငျး” စသဖွငျ့ အခှငျ့အာဏာကို ဖှဲ့စညျးပုံခုံရုံးမှာ အပျနှငျးတာဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ ၎င်းငျး၏ဆုံးဖွတျခကျြဟာ အပွီးသတျဖွဈရမယျဟုလညျး ဖျောပွထားတယျ…ဆိုတော့.. ဖှဲ့စညျးပုံဆိုငျရာခုံရုံးကို ကွညျ့ရငျ… နိုငျငံတျောသမ်မတက ခနျ့အပျတာဝနျပေးတာဖွဈပွီး.. နိုငျငံတျောသမ်မတဆိုသူကလညျး ပွညျထောငျစု အစိုးရအဖှဲ့ဝငျဖွဈတယျ။
၆။ နိုငျငံရေးပါတီနှငျ့ အစိုးရ
မွနျမာနိုငျငံဟာ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီစနဈ ကငျြ့သုံးတဲ့နိုငျငံဖွဈကာ.. ပါတီတိုငျးမှာ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ဖှဲ့စညျးပုံ စညျးမဉျြး၊ မူဝါဒသဘောထား၊ ရညျရှယျခကျြ စတာတှရှေိစမွဲပါ။ ဆိုတော့ အစိုးရဖှဲ့စညျးခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပါတီနဲ့ လုံးဝသကျဆိုငျတယျဆိုတာ အားလုံးအသိပငျဖွဈတယျ။
အခုမွနျမာနိုငျငံဟာ ၂၀၀၈ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒနေဲ့ နှဈကွီမျတိုငျတိုငျ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ပွုလုပျကငျြးပပွီးဖွဈတယျ… ၂၀၁၀ခုနှဈမှာ USDP ပါတီက အမြားဆုံးနိုငျတဲ့အတှကျ အစိုးရဖှဲ့နိုငျခဲ့တယျ.. ၂၀၁၅ခုနှဈမှာ NLD ပါတီက အမြားဆုံးအနိုငျရရှိတဲ့အတှကျ ပွညျထောငျစုလှတျတျာမှာ သမ်မတကို တငျမွှောကျပွီး သူက အစိုးရဖှဲ့နိုငျခဲ့တယျ… အစိုးရဖှဲ့စညျးနိုငျတဲ့ပုဂ်ဂိုလျဟာ နိုငျငံတျောသမ်မတဖွဈတာကို အားလုံးအသိပငျဖွဈတယျ။ နိုငျငံတျောသမ်မတကိုလညျး အနိုငျရပါတီက လှတျတျောမှတဆငျ့ ရှေးခယျြ တငျမွှောကျမှာဖွဈတယျ။
တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရနဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာဟာ ဇယား(၂)မှာ ဖျောပွထားပွီးဖွဈတယျ..သို့သျောလညျး ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမှော တိုငျး/ပွညျနယျရဲ့လုပျပိုငျခှငျ့(ဇယား-၂)ကို ပွညျထောငျစုက လုံးဝစှကျဖကျခွငျးမပွုရ ဆိုတဲ့ ကနျ့သတျထားတဲ့ပွဌာနျးခကျြမပါရှိခဲ့ပါ။ ဒါ့အပွငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ၊ ဇယား-၁,၂,၃ မှာ ဖျောပွ မထားသောကိစ်စရပျတှေ ကွှငျးကနျြအာဏာ(Residual power)ဟာ ပွညျထောငျစုမှာပဲ လုပျပိုငျခှငျ့ရှိတယျလို့ ထပျပွီးအပျနှငျးပွနျတယျ။ ဆိုလိုတာက တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှအေပျေါ ပွညျထောငျစုက အခြိနျမရှေး ဝငျရောကျစှကျဖကျနိုငျတယျဆိုတဲ့ သဘောသကျရောကျသှားတယျ။ ဆိုတော့ တိုငျး/ပွညျနယျတဈခုမှာ ပွညျထောငျစုအစိုးရဖှဲ့စညျးနိုငျသောပါတီ မဟုတျဘဲ အခွားပါတီက အစိုးရဆိုရငျ လုပျငနျးဆောငျရှကျတဲ့အခါ ပူးပေါငျးမှုအားနညျးနိုငျတယျ။ တိုငျး/ပွညျနယျလှတျတျောအတှငျးမှာလညျး တဈဖှဲ့နဲ့တဈဖှဲ့ ကနျ့လနျ့ကာ တိုကျမှုမြားနဲ့ ပွညျသူတှကေို အကြိုးမပေးနိုငျဘဲ သကျတမျးကုနျသှားမိမယျလို့ ကြှနျတျောယူဆမိပါတယျ။
၇။ တိုငျး/ပွညျနယျအစိုးရနှငျ့ ကိုယျစားလှယျမြား၏ စှမျးဆောငျရညျ
ဒီတဈခကျြက ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ အရေးကွီးတယျလို့မွငျတယျ… ဘာဖွဈလိုလဲဆိုရငျ.. တိုငျး/ပွညျနယျ အစိုးရမှာ ဘယျပါတီက အစိုးရဖှဲ့ဖှဲ့ အဲ့ဒီအစိုးရ (ဝနျကွီးမြား)ရဲ့စှမျးဆောငျရညျမရှိရငျ…. ဘာမှလုပျနိုငျမှာ မဟုတျဘူး… ဝနျကွီးတဈဦးဟာ မိမိဒသေအခွနေေ၊ လုပျငနျးတာဝနျမြားနဲ့သကျဆိုငျသော ဥပဒေ၊ နညျးဥပဒေ၊ အမိနျ့၊ ညှနျးကွားခကျြ၊ လုပျထုတျလုပျနညျးတှကေို နားလညျသဘောပေါကျဖို့ လိုတယျ.. သိဖို့လညျးလိုတယျ။ အဲ့လိုပဲ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှလေညျး ဥပဒေ၊ နညျးဥပဒေ၊ အမိနျ့၊ ညှနျးကွားခကျြ၊ လုပျထုတျလုပျနညျးတှကေို နားလညျသဘောပေါကျဖို့ လိုတယျ.. သိဖို့လညျးလိုတယျ.. နိုငျငံရေးသမားမှနျရငျ ဥပဒထေဲက လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာတှကေို ရှာတတျဖို့လိုတယျ။ ပွညျသူအသံကိုလညျး နားထောငျရမယျ… လေးစားရမယျ။ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတဈဦးဟာ တိုငျး/ပွညျနယျလှတျတျောဆိုငျရာဥပဒေ၊ ပုဒျမ-၁၀ မှာ လုပျပိုငျခှငျ့တှေ ပေးထားပွီးဖွဈတယျ.. ဆိုတော့ တခြို့ကိစ်စတှမှော ဝနျကွီးဖွဈစေ၊ လှတျတျောကိုယျစားလှယျဖွဈစေ ပါတီအပျေါ အခွမေခံဘဲ ပုဂ်ဂိုလျ၏စှမျးရညျ(personal ability) အပျေါမှာ အရမျးကိုမူတညျတယျလို့ ထငျမိပါတယျ။ နောကျတဈခုက စိတျရငျးစတေနာ… ဘယျဝနျကွီး/ကိုယျစားလှယျ ပဲဖွဈဖွဈ… ဘယျလောကျပဲ တျောတျော.. သိသိ.. စိတျရငျးစတေနာမရှိရငျ ပွညျသူတှကေို ကောငျးကြိုးမပေးနိုငျပါဘူးလို့ သုံးသပျမိပါတယျ။
စာရေးသူ၏ သဘောထားမြားသာဖွဈပွီး ခငျြးလဲနျးပို့ဈ၏ အာဘျောမဟုတျကွောငျးအသိပေးတငျပွအပျပါသညျ။ အယျဒီတာအဖှဲ့
ပြည်သူများ နားလည်သင့်ပြီမလား? သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရော့ ဘယ်အဆင့်လဲ?
၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မိတ်ဆက်ခြင်း
နိုင်ငံတိုင်းမှာ အခြေခံဥပဒေ သို့မဟုတ် အခြေခံဥပဒေကဲ့သို့ တည်ဆဲဥပဒေ၊ စီရင်ထုံး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အဆိုအမိန့်စသဖြင့် ရှိကြတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေ မှာဆိုရင် အခြေခံဥပဒေဟု ခေါ်ဆိုကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ယခုကျင့်သုံးနေတဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာက နိုင်ငံတော်ကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံနဲ့သွားမလဲ… မဏ္ဍိုင်(၃)ရပ်ဖြစ်တဲ့ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးတို့ကို သီးခြားထားရှိပြီး အပြန်အလှန်ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းမလဲ…. အာဏာ(၃)ရပ်ကို ဘယ်လိုခွဲဝေကျင့်သုံးမလဲ.. ဥပမာ-တိုင်း/ပြည်နယ်တွေကို အာဏာကို ဘယ်လိုခွဲဝေမလဲ.. ဘယ်လောက်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးထားမလဲ.. ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ကျင်းပမလဲ. .စတာတွေကို အခြေခံအားဖြင့် ဖော်ပြသတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။
ယခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလျှင် ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း (၅)နှစ် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလျက်ရှိသော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို နိုဝင်ဘာလ(၈)၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်(တနင်္ဂနွေနေ့)မှာ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံး တပြိုင်နက် ကျင်းပရန် ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှ အနိုင်ရရှိလာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက လွှတ်တော်ကနေတဆင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမယ်ဖြစ် တယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရဆိုတဲ့အခါ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆောင်သော အဖွဲ့ကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက သူ့အစိုးရအဖွဲ့ (ပြည်ထောင်စုအစိုးရ)ကို ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနဲ့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်တို့ ပါဝင်တာဖြစ်တယ် (ပုဒ်မ-၂၀၀-ဖွဲ့စည်းပုံ)။ သူ့အစိုးရအဖွဲ့(ပြည်ထောင်စုအစိုးရ)ကို ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာလည်း သူလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေ ဥပဒေက သတ်မှတ်ထားတဲ့အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်စုံလျှင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရမယ်ဖြစ်တယ်။ ကာကွယ်ရေး၊ နယ်စပ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးများမပါ။
၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဇယား(၅)ခုရှိတဲ့အနက် (၃)ခုဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဇယား(၁)မှာဆိုရင် ပြည်ထောင်စုက ဥပဒေပြုခွင့်ရှိသော ကိစ္စရပ်များ၊ ဇယား(၂)မှာက တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်က ဥပဒေပြုခွင့်ရှိသော ကိစ္စရပ်များ၊ ဇယား(၃)မှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း(သို့မဟုတ်)ဒေသဦးစီးအဖွဲ့က ဥပဒေပြုခွင့်ရှိသော ကိစ္စရပ်များ စသည့်ဖြင့် ဖော်ပြပေးထားတယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့်(အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ဖြစ်စေ၊ တရားရေးဖြစ်စေ)က စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော ကိစ္စရပ်တွေဟာ ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုစာရင်း(ဇယား-၁)မှာ ဖော်ပြသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကဏ္ဍကြီး(၁၁)ရပ်ရှိတဲ့အနက် လုံးဝကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာသာ အပ်နှင်းပေးထားတာက ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံခြားရေးကဏ္ဍနှင့် တရားရေးကဏ္ဍများ (Union Defense and Security Sector, Foreign Affairs Sector and Judicial Affairs Sector) ဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့ ကဏ္ဍ(၈)ရပ်တွေက ပြည်ထောင်စုက ပြဌာန်းတဲ့ဥပဒေ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုအဆင့်က စီမံဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဖော်ပြသတ်မှတ်ပေးထားခြင်းများမှအပ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဥပဒေပြုစာရင်း (ဇယား-၂)မှာ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်တယ်။
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်က စိမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့ကိစ္စရပ်များဟာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေပြု စာရင်း(ဇယား-၂)မှာ ကဏ္ဍပေါင်း(၈)ရပ်နဲ့ ဖော်ပြထားတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသ၏ စီမံအုပ်ချုပ် ခွင့်ရကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်တော့ ဇယား(၃)မှာ ဖော်ပြထားပါ။ အသေးစိတ်တော့ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။
၄။ တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ၎င်းတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ
နိုင်ငံတော်သမ္မတက တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထဲက သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်စုံသူတစ်ဦးအား ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်လွှတ်တော်ထံ သဘောတူညီချက်ရယူရန် တင်သွင်းရမယ်(ပုဒ်မ-၂၆၁-ခ(၂)၊ဖွဲ့စည်းပုံ)။ သူဟာ သတ်မှတ်အရည်ချင်းနဲ့ ပြည့်စုံရင် လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်ခွင့်မရှိပါ။ အကယ်လို့ လွှတ်တော်က ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားနဲ့ ကန့်ကွက် နိုင်ရင်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာ မရရအောင် ထပ်မံတင်သွင်းခွင့်ရှိပြန်တယ်။ ဆိုတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာ သူလိုချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်ကို ခန့်ရမယ့် တာဝန်ရှိနေတယ်။
အဲ့လိုပဲ ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်း သူ့အစိုးရအဖွဲ့(တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့)ကို သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထဲကဖြစ်စေ၊ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေ ရွေးချယ်ရတယ်။ ပြီးရင် ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ စာရင်း(ဝန်ကြီးများစာရင်း)ကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ထံ သဘောတူညီချက်ရယူဖို့ တင်သွင်းရမည်။ လွှတ်တော်ကလည်း သတ်မှတ်တဲ့အရည်းချင်းနဲ့ပြည်စုံရင် ငြင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူး(ပုဒ်မ-၂၆၂-ဂ)၊ဖွဲ့စည်းပုံ။ ငြင်းပယ်ရန် အကြောင်းရှိရင်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်က ထပ်မံတင်သွင်းခွင့်ရှိတယ်။ ပြီးမှ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တင်ပြအကြောင်းကြားရတယ်။
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာသည် ဇယား(၂)ရဲ့ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော်က ဥပဒေပြုခွင့်ရှိသော ကိစ္စရပ်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်က တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရကို စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးသောကိစ္စရပ်များ စသည်တို့ကိုပေးထားတယ်(ပုဒ်မ-၂၄၉၊ဖွဲ့စည်းပုံ)။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ချမှတ်သော မူဝါဒများနဲ့ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စု ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နဲ့ဖြစ်စေ မဆန့်ကျင်စေဘဲ မိမိတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီး စီမံကိန်းများကို မိမိလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရသည် ၎င်းဝန်ကြီးများ၏ လက်အောက်ရှိ အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်စေ၊ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်စေ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ လမ်းညွန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုနိုင်တယ်(ပုဒ်မ-၃၁၊ တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရ ဥပဒေ)။ ပြီးတော့ မိမိတို့ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ပေါင်းစပ်ညှိုနှိုင်းပေးခြင်းကို လက်ခံလိုက်နာရမယ်(ပုဒ်မ-၃၀၊ တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရ ဥပဒေ)။
အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှာသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားပြီး ၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်ရမယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်(ပုဒ်မ-၃၂၊ တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရ ဥပဒေ)။ အဲ့ဒီလိုပဲ ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင်မှာလည်း တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်က ပြုထားသော ဥပဒေနှင့် ပြည်ထောင်စုက ပြုထားသော ဥပဒေအကြား ကွဲလွဲမှုရှိပါက ပြည်ထောင်စုဥပဒေကသာ အတည်ဖြစ်ရမယ်ဟု ဖော်ထားတယ်။
တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရက တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့ချမှတ်ထားသော အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရမည့်အပြင် လွှတ်တော်ထံကိုလည်း ပြန်တင်ပြရမည်။ မိမိနယ်မြေ ဒေသ၏အခြေနေနှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထံသို့ တင်ပြရမည်ဟု ဖော်ပြထားတယ်။
၅။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရ၏ဆက်နွယ်မှု
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာဟာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဥပဒေပြုနိုင်သော ကိစ္စရပ်များဖြစ်ရမည်ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ-၂၁၆မှာ ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများသည် ယင်းတို့၏ လက်အောက်ရှိအစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ငန်းတာတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ဥပဒေနဲ့အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ လမ်းညွန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုအစိုးရဥပဒေ၊ ပုဒ်မ-၅၄မှာ ဖော်ပြထားတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ သီးသန့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို မဖော်ပြတော့ပါဘူး။
ဆိုတော့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးဌာနများအခန်းကဏ္ဍကိုကြည့်ရအောင်…ဝန်ကြီးဌာနပေါင်း (၂၀)ကျော်ရှိတယ်။ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ချင်းစီမှာ အဆင့်ဆင့်သောဌာများ- တိုင်း/ပြည်နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့် စသဖြင့် ဌာနဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာရှိကြသလို ဌာနတွင်း စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ အမိန့်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စတာတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီမှာ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကနေ အထက်ကို တင်ပြပြီး..အထက်ကအတည်ပြုပေးကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် တာရှိသလို….အထက်က အောက်အဆင့်(အဆင့်နိမ့်)သို့ ညွှန်ကြားပြီး ဆောင်ရွက်ခိုင်းတာလည်းရှိတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနတိုင်းမှာ ယင်းတို့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် စတာတွေရှိတယ်။ တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရကိုလေ့လာကြည့် မယ်ဆိုရင် တဆင့်ခံဝန်ကြီးဌာနတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ ကြည့်မယ်ဆိုရင်…. ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ စီမံဆောင်ရွက်မှုသာ အတည်ဖြစ်တာများတယ်။ အဲ့ဒီမှာ တိုင်း/ပြည်နယ် အစိုးရရဲ့ စီမံဆောင်ရွက်မှုဟာ ဥပဒေနှင့်ညီရင်..မရဘူလား…မေးစရာရှိတယ်…ဟုတ်တယ်.. မှန်ပါတယ်.. သို့သော် လက်တွေ့မှာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေရဲ့ အနှစ်သာရ၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် စတာတွေဟာ… ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခုံရုံးမှာပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ရှိတာဖြစ်တော့… ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ စီမံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာ မျက်နှာသာ အနိုင်ပေးတာများ တယ်။ ဥပဒေအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် “ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းဒေသကြီးများ၊ ပြည်နယ်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများ၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိမရှိ စိစစ်ခြင်း” ဟု ပုဒ်မ-၃၂၂(ဂ)မှာ ဖော်ပြထားတယ်။ အဲ့လိုပဲ ပုဒ်မ-၃၂၂(င)မှာလည်း “တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုတို့က ပြည်ထောင်စုဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ပေါက်သည့် အငြင်းပွားမှုများကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း” စသဖြင့် အခွင့်အာဏာကို ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးမှာ အပ်နှင်းတာဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အပြီးသတ်ဖြစ်ရမယ်ဟုလည်း ဖော်ပြထားတယ်…ဆိုတော့.. ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခုံရုံးကို ကြည့်ရင်… နိုင်ငံတော်သမ္မတက ခန့်အပ်တာဝန်ပေးတာဖြစ်ပြီး.. နိုင်ငံတော်သမ္မတဆိုသူကလည်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်။
၆။ နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် အစိုးရ
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကာ.. ပါတီတိုင်းမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်း၊ မူဝါဒသဘောထား၊ ရည်ရွယ်ချက် စတာတွေရှိစမြဲပါ။ ဆိုတော့ အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီနဲ့ လုံးဝသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပင်ဖြစ်တယ်။
အခုမြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ နှစ်ကြီမ်တိုင်တိုင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပပြီးဖြစ်တယ်… ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ USDP ပါတီက အများဆုံးနိုင်တဲ့အတွက် အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်.. ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ NLD ပါတီက အများဆုံးအနိုင်ရရှိတဲ့အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တ်ာမှာ သမ္မတကို တင်မြှောက်ပြီး သူက အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်… အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်တာကို အားလုံးအသိပင်ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုလည်း အနိုင်ရပါတီက လွှတ်တော်မှတဆင့် ရွေးချယ် တင်မြှောက်မှာဖြစ်တယ်။
တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဟာ ဇယား(၂)မှာ ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်..သို့သော်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ တိုင်း/ပြည်နယ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်(ဇယား-၂)ကို ပြည်ထောင်စုက လုံးဝစွက်ဖက်ခြင်းမပြုရ ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ပြဌာန်းချက်မပါရှိခဲ့ပါ။ ဒါ့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ဇယား-၁,၂,၃ မှာ ဖော်ပြ မထားသောကိစ္စရပ်တွေ ကြွင်းကျန်အာဏာ(Residual power)ဟာ ပြည်ထောင်စုမှာပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ထပ်ပြီးအပ်နှင်းပြန်တယ်။ ဆိုလိုတာက တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် ပြည်ထောင်စုက အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်သွားတယ်။ ဆိုတော့ တိုင်း/ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်သောပါတီ မဟုတ်ဘဲ အခြားပါတီက အစိုးရဆိုရင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ပူးပေါင်းမှုအားနည်းနိုင်တယ်။ တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွင်းမှာလည်း တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ ကန့်လန့်ကာ တိုက်မှုများနဲ့ ပြည်သူတွေကို အကျိုးမပေးနိုင်ဘဲ သက်တမ်းကုန်သွားမိမယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။
၇။ တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်
ဒီတစ်ချက်က ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်… ဘာဖြစ်လိုလဲဆိုရင်.. တိုင်း/ပြည်နယ် အစိုးရမှာ ဘယ်ပါတီက အစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့ အဲ့ဒီအစိုးရ (ဝန်ကြီးများ)ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မရှိရင်…. ဘာမှလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး… ဝန်ကြီးတစ်ဦးဟာ မိမိဒေသအခြေနေ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များနဲ့သက်ဆိုင်သော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်းကြားချက်၊ လုပ်ထုတ်လုပ်နည်းတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုတယ်.. သိဖို့လည်းလိုတယ်။ အဲ့လိုပဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်းကြားချက်၊ လုပ်ထုတ်လုပ်နည်းတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုတယ်.. သိဖို့လည်းလိုတယ်.. နိုင်ငံရေးသမားမှန်ရင် ဥပဒေထဲက လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကို ရှာတတ်ဖို့လိုတယ်။ ပြည်သူအသံကိုလည်း နားထောင်ရမယ်… လေးစားရမယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဟာ တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ပုဒ်မ-၁၀ မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်.. ဆိုတော့ တချို့ကိစ္စတွေမှာ ဝန်ကြီးဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စေ ပါတီအပေါ် အခြေမခံဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်၏စွမ်းရည်(personal ability) အပေါ်မှာ အရမ်းကိုမူတည်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက စိတ်ရင်းစေတနာ… ဘယ်ဝန်ကြီး/ကိုယ်စားလှယ် ပဲဖြစ်ဖြစ်… ဘယ်လောက်ပဲ တော်တော်.. သိသိ.. စိတ်ရင်းစေတနာမရှိရင် ပြည်သူတွေကို ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
စာရေးသူ၏ သဘောထားများသာဖြစ်ပြီး ချင်းလဲန်းပို့စ်၏ အာဘော်မဟုတ်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့
Previous Inn Pipi Maw Kan Sak Hmasa Lai, Khualipi Muisam Dah Kan Ser Hmasa Lai?
Next Nunphung Karceh Ah Chinmi Kan Tlau Maw?